बहसमा नयाँ बजेट : छलफलबाट पन्छिँदै सरकार – Chitwan Post
बहसमा नयाँ बजेट : छलफलबाट पन्छिँदै सरकार
हेटौँडा । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ नजिक आइरहेको छ तर सरकार लकडाउनको कारण बजेटको पर्याप्त तयारी गर्न सकिरहेको छैन । बागमती प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको लागि पर्याप्त तयारी गरेता पनि अहिलेसम्म प्रि बजेट छलफल सुरु गर्न सकेको छैन । जेठ १ गतेबाट हुनुपर्ने प्रि बजेट छलफल बागमती सरकारले गर्न सकेन ।
अर्थ समितिले थाल्यो छलफल
बागमती प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिले आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्ने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ । समितिले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत अर्थ विज्ञहरुसँग छलफल सुरु गरेको हो । समितिले बुधबार बजेटले समेट्नुपर्ने नयाँ क्षेत्रहरु, कोरोनाको कारण भएको पछिल्लो स्थितिले पारेको प्रभावको विषयमा छलफल गरेको समितिका सभापति सरेश नेपालले जानकारी दिएका छन् । उक्त छलफलमा बजेटमा पर्नु पर्ने अबको प्राथमिकता विषयमा विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञहरुसँग छलफल गरेको हो ।
स्वास्थ्यमा पहुँचदेखि परियोजना बैंक कार्यान्वयनसम्म
विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुलाई बागमती प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले आगमी बजेटको लागि विभिन्न सुझावहरु दिएका छन् । विशेषगरी नयाँ बजेटमा अब कोरोना भाइरसको संक्रमण नियत्रणलाई हेर्दै जनस्वास्थको क्षेत्रमा सर्वसाधारणको पहुँच, स्वास्थ संस्थाहरुको पूर्वाधार विकास, स्वास्थकर्मी र उपचारमा विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
यस्तै बजेटमा उत्पादन र रोजगारी बढाउने गरी कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाएर खाद्य संकट टार्ने, परनिर्भरता घट्ने तथा ग्रामीण क्षेत्रमै रोजगारी वृद्वि गर्न सकिने कुराहरु विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । समितिले सरकारलाई दिने सुझावमा प्रदेशलाई स्थानीय र संघीय दुवैसँग सहकार्य गर्ने अनुकुलता रहेकोले योजना निर्माण, सञ्चालन र संरक्षणमा सहकार्य बढाई समन्वयलाई जोड दिने कुरा समावेश गर्न विज्ञहरुले आग्रह गरेका छन् ।
पुँजीगत खर्च बढाऔँ
अर्थ तथा विकास समितिका सभापतिले पुँजीगत खर्च गर्ने सामथ्र्यता निरन्तर ओरालो लाग्दै गर्दा सरकार भने दोष दिएर उम्किन खोजिरहेको तर्क गरेका छन् । सभापति सरेश नेपालले भने “कहिले जनशक्तीलाई, कहिले स्रोत परिचालनलाई, कहिले कानुनलाई दोष दिएर हामी उम्किरा छौँ । यससम्बन्धी गहिरो अध्ययन हुनुपर्छ, शत प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने हाम्रो क्षमता बढाउन के के गर्नुपर्छ त्यो योजना बनाऔँ ।” समितिले अतिआवश्यक भन्दा पनि अन्यतर्फ सरकारको ध्यान गइरहेकोमा सुझाव संकलन गरेको छ । समितिमा विज्ञहरुले सरकारलाई यसरी प्रश्नात्मक सुझाव दिएका छन् “सदरमुकाममा रंगशाला महत्त्वपूर्ण कि प्रत्येक पालिकामा स्वास्थ्यसम्बन्धी भवन ? बाँझो जमिनमा सिँचाइले उत्पादन र रोजगारी बढाउन मद्दत गर्छ कि शान्ति पार्कले ?”
अबण्डा बजेट नराख्न सुझाव
बागतमी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले सरकारलाई अबण्डा बजेट नराख्न बारम्बार निर्देशन दिइरहेको थियो भने समितिले गरेको छलफलमा फरि उक्त सुझाव प्राप्त भएको छ । सुझावमा भनिएको छ “गलत मनसायसहित भ्रष्टाचारलाई मलिलो भूमि बनाइदिने नियोजित षडयन्त्ररुपमा अबण्डा बजेट रहँदै आएको छ । बाहिर जतिसुकै लिपपोत गरे पनि भ्रष्टाचार गर्ने मनसायले नै अबण्डा बजेट बन्ने गरेको छ । यो विश्वव्यापी स्थापित बुझाइ हो । जुन मन्त्रालयमा बढी अबण्डा बजेट छ त्यहीँ बढी अनियमितता देखिन्छ ।” समितिको सुझावमा समितिलाई सरकारको सहयोगी भूमिका हुनुपर्नेसमेत रहेको छ ।
संसदको क्षेत्रभित्र पर्ने ऐन, नियामावली, कार्यविधिको अनुगमन तथा निगरानीमा सरकारको सहयोगी भूमिका हुनुपर्ने र बजेटले सुशासन र पारदर्शिताको भावनालाई आत्मासात् गर्नुपर्ने बताइएको छ । यस्तै बागमती प्रदेशले पहिलो आवधिक योजना बनाए पनि त्यसकै प्रकाशमा वार्षिक बजेट बन्ने गरेको भन्दै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले अगाडि सारेको परियोजना बैंकको अवधारणा ठीक रहेको सुझाव दिएको छ । उक्त परियोजना बैंकलाई सरकारले नअलमल्याउनसमेत समितिमा सुझाव आएको छ ।
अर्थ तथा विकास समितिका सभापति सरेश नेपालको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा अर्थ तथा विकासविज्ञहरु प्रा.डा. अर्जुन कार्की, डा. जगदीशचन्द्र पोख्रेल, डा. पिताम्बर शर्मा, डा. खिमलाल देवकोटा र डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले सुझाव दिएका थिए भने समितिका सदस्यहरु र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द पौड्यालको सहभागिता रहेको थियो ।
सरकार धकेल्न खोज्दै प्रि-बजेट छलफल
बागमती प्रदेश सरकारले जेठ १ गतेबाट प्रि बजेटको छलफल सुरु गर्नुपर्ने भएता पनि हुन सकेको छ । सरकारले मंगलबार आर्थिक कार्यविधि ऐनमा संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरेसँगै प्रि बजेट धकेलिने देखिएको छ । सरकारको आर्थिक कार्यविधि ऐनमा संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी भएपछि प्रिबजेट छलफल पर धकेलिने भएको हो । यसअघि जेठको पहिलो साता प्रि बजेटको छलफलको तयारी गरेको प्रदेशसभा वैठक पनि प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईंले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेपछि बैठक अनिश्चित भएको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारले संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेर आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन गरेको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐनको दफा ९ मा पूर्वबजेट छलफल कम्तीमा एक महिनाअघि नै हुनुपर्ने प्रावधान रहेको थियो । तर, सरकारले तयारी गर्न नसकेपछि अध्यादेश जारी गरेर १५ दिनअघिमात्रै “आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले पूर्वबजेट पेस गरे हुने” गरी बनाइएको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रिबजेटको १५ दिनसम्म घटाउन मिल्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको भन्दै अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेका छन् । यता आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले संकटको समयमा संसद्को उपस्थिति कम हुने भएकोले अध्यादेश ल्याएको बताए । उनले बजेटको छलफल विस्तृतरुपमा समयमा सकिने दाबी पनि गरे ।
आवश्यकता हेरेर मात्रै कोरोना परीक्षण गरिने